Global Voices teny Malagasy » Fanomanana paikady: Fananganana tetezana fa tsy rindrina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Jolay 2019 8:34 GMT 1	 · Mpanoratra Georgia Popplewell, Ivan Sigal Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Teboka fanombohana fotsiny ho an'ny fifanakalozan-kevitra ireo rehefa miseho ireo hevitra hafa. Faly izahay mahita ny adihevitra mivezivezy ao amin'ireo lisitra sy vondrona karajia anatiny misy antsika, ary koa ireo tantara lehibe amin'ny fizarana Fitantarana Manokana ny Fifidianana Amerikana .
Miomana mialoha amin'ny resadresaka mivantana tsirairay miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina  ihany koa izahay ao amin'ny ekipa fototra mikasika ny manodidina ny fanadihadiana ny vondrom-piarahamonina , izay tena mahavokatra sy manome hazavana. Raha mbola tsy nameno ny fanadihadiana amin'ny fomba mahaleotena ianao, na mbola tsy nisoratra anarana amin'ny tafatafa mivantana , dia mandrisika anao izahay hanao izany haingana araka izay tratra. Araka ny fantatrao, hivory ao Mexico City amin'ny 30 Novambra-4 Desambra araka ny fanaony isa-potoana momba ny paikady ny ekipa fototra, ary ho ampahany mana-danja amin'ny fandaharam-potoananay ny hevitrao sy ny tolo-kevitrao. [Mba hahamora kokoa ny fisoratana anarana, dia nampianay taratasy famenoana eto ambany. (efa vita)]
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/10/141148/
 Fitantarana Manokana ny Fifidianana Amerikana: https://globalvoices.org/specialcoverage/the-bizarre-and-historic-us-presidential-election/
 resadresaka mivantana tsirairay miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina: https://community.globalvoices.org/2016/11/strategy-planning-a-new-approach-to-the-community-survey/
 fanadihadiana ny vondrom-piarahamonina: http://bit.ly/2f63z55
 tsy nisoratra anarana amin'ny tafatafa mivantana: https://goo.gl/forms/Nlmn48YSk7JNWacV2